दुई टाउको भएको सर्प ! - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
दुई टाउको भएको सर्प !
एजेन्सी । अमेरिकाको मिड-एटलान्टिक क्षेत्र अन्तर्गत पर्ने न्यूजर्सीस्थित जंगलमा दुईवटा टाउको भएको एक अनौठो सर्प फेला परेको छ । वातावरणवादी समूह अध्ययन भ्रमणका लागि सो स्थानमा जाँदा त्यस्तो सर्प भेटिएको हो । त्यसको नाम ‘डबल डेभ’ राखिएको छ ।
सो सर्पका पूर्ण विकसित दुईवटा टाउका, चारवटा आँखा र दुईवटा जिब्रो पाइएका छन् । ती सबैले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गरिरहेको देखिएको छ । वातावरणविद् डेभीड स्केनदरले सो सर्पलाई बाँच्न निकै कठीन जस्तो देखिएको जनाए ।
दुई-टाउको भएको सर्प प्राय: मानिसको जुम्ल्याहा बच्चा जन्मेका जसरी नै जन्मन्छ । विकासशील भ्रूण दुवै (जुम्ल्याहा)मा विभाजन हुन थाल्छ । तर त्यसपछि आंशिक बाटोमा रोकिन्छ।
उनी र उनका साथीले सर्पको नाम डबल डेभ राखेका हुन् । सर्प भेट्ने दुवैको नाम डेभीड भएकोले सर्पको नाम पनि उनीहरुले त्यसैसँग जोडेर डेभीडको स्थानमा डेभ गरेर डबल डेभ राखेका हुन् । उनीहरुले सो सर्पलाई गएको अगस्ट २५ का दिन फेला पारेका थिए ।
काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड...
काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारी बनेको कोरोना भाइरस(...
काठमाडौं । विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस फैलिएक...